Iklabishi ebomvu: izakhiwo ezifanelekileyo
Iklabishi ebomvu, izakhiwo ezixhamlayo ezaziwa ngabantu abaninzi, zinomlando omkhulu eRashiya. Kwiminyaka ye-XVII yayingeniswe kwiNtshona Yurophu phantsi kwegama elithi "iklabishi eluhlaza". Abantu baseRussia baqonda ngokukhawuleza yonke inzuzo yale mifuno. Iklabishi ebomvu inokufana kunye nokwahlukana neklabishi emhlophe. "Iklabishi ebhakabhaka", njengeklabishi emhlophe, ifikeleleka, imva kunye nephakathi. Iklabishi ebomvu inentloko encinane kuneklabishi emhlophe.
Iklabishi ebomvu inamagqabi ahlaza okwesibhakabhaka kunye nama-shades ahlukeneyo. Oku kungenxa yokuba le klabishi iqukethe into ekhethekileyo-anthocyanin. Le nkunkuma inefuthe elihle kumzimba womntu. Ukungenelela egazini, i-anthocyan igxininisa iindonga zeempahla, ikhulisa ukunyaniseka kwama-capillary kwaye ikhusela iintsholongwane.
Iklabishi ebomvu ayisoloko ilungelekile njengowomgcini. Kodwa kukho ezininzi izondlo kunye namavithamini kuwo. I-potassium, i-magnesium, isinyithi, i-phytoncides, i-enzyme, iiprotheni kunye ne-fiber-konke oku kubomvu iklabishi ebomvu. Kuyaziwa ukuba eRoma lasendulo, izifo zamaphaphu zaphathwa ngeebomvu zeruba. Isifo sesifo sofuba emzimbeni wethu asikwazi ukukhula ukuba kukho iklabishi ebomvu - iqukethe i-phytoncids ekhusela ukuphuhliswa kwesifo sofuba.
Iklabishi ebomvu, ijusi layo lisetyenziselwa ukuphatha abantu abane-jaundice. It has a clean properties - isusa izinto ezinobungozi emzimbeni womntu, kuquka nesibindi. Inokudliwa kwakhona phambi kweeholide okanye iziganeko, apho uya kulala khona iiglasi. Iklabishi ebomvu ihamba umphumo wotywala.
Izazinzulu zaseDanish ziye zafakazela ukuba iklabishi ebomvu inciphisa umngcipheko wokuba nomhlaza wesibeleko sebele kwabesetyhini kwisiqingatha. Iklabishi elubomvu inika i-glucosinolates enomvandalo, enokuthintela ukwahlukana kwamaseli omhlaza.
Abantu abaneengcinezelo zengcinezelo, kubalulekile ukubandakanya ekutya kwabo iklabishi ebomvu, kuba ukunciphisa uxinzelelo lwegazi. Kubonakaliswe ukuba kufuneka kusetyenziswe ukukhusela izifo ze-vascular. Ijusi yeklabishi iqukethe i-bioflavonoids, efunekayo ukukhusela ukuhlukana kwama-capillaries, ngegazi.
Iklabishi ebomvu inokuqinisa, inceda ukukhusela isisu esiswini. Kodwa iklabishi ebomvu yinto enzima kakhulu-i-fibestible fiber, ngoko abantu abanokuphulwa kwimihlathi yesisu kuba ngcono ukuyeka.
Iichiza zamasiko azizange zidlulele iimpawu ezixhamlayo zeklabishi ebomvu. Ngeentloko, intloko ihlanganiswe ngamagqabhagabha ekhabishi, asetyenziselwa amanxeba, ukusika kunye nokutshisa. Ijusi yeklabishi ebomvu yenza abantombazana baqhawule, kwaye amadoda agcwele amandla.
U-Anthocyanin, oqulethe iklabishi ebomvu, unika ukugonywa okukhethekileyo. Yingakho abaninzi abaninikazi benqaba ukukhula kwiindawo zabo. Kakade, le klabishi ayinjalo njengeklabishi emhlophe. Unomdla othile kunye nokwakhiwa kwezinto eziphilayo. Kodwa izibonelelo zokuzisebenzisa zikhulu kakhulu. Ukongeza, iJubusi ebomvu ingasetyenziswe ngokulula kwezo zokupheka ezifuna iklabishi emhlophe. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa ukupheka iilwandle.
Kwiklabishi ebomvu, umxholo we-vitamin C uphakamileyo kabini kwiklabishi emhlophe, kunye ne-carotene - amaxesha amane. Ukusetyenziswa kweli klabishi kukhuthaza umzimba ophilileyo. Xa ukhwehlela, kucetyiswa ukuba usebenzise ijusi yayo kunye nokongeza kweswekile. Isiraphu esiphumelayo kufuneka isetyenziswe iipuni ezimbalwa ngosuku.
Xa ukhula iklabishi ebomvu kufuneka ubeke ingqalelo kula manqaku alandelayo:
1. Iklabishi ebomvu inqabile ngaphezu kweklabishi emhlophe.
2. Kuphantsi komonakalo omncinci ngeentlobo zeegadi kwaye ukhuselwe kwizifo.
3. Iinduna ezibomvu iklabishi zigcinwe ngokupheleleyo ebusika.
4. Izithombo kufuneka zikhule ngaphandle. Kwaye ngo-Meyi-Juni iklabishi kufuneka ityalwe.
Iklabishi ebomvu iyalinywa kunye neklabishi emhlophe.
Ewe, iklabishi ebomvu inokusetyenziswa kwayo ngokupheka. Kodwa ezininzi zokupheka zifanelekile zombini iklabishi ebomvu neyemhlophe. Ngoko, ungayisebenzisa njani iklabishi ebomvu? Ukupheka isidlo esihlwabusayo, esinomdla kunye nesempilweni sokutya, inyama yenkukhu okanye ama-mushroom, kwanele ukukhipha iklabishi ngee-karoti kunye no-anyanisi. Kodwa ukugcina zonke izixhobo eziwusizo, kungcono ukupheka iklabishi yesibini. Iklabishi ebomvu ibaluleke kakhulu ekukhetheni kunye ne-salting, kunye neklabishi emhlophe. Ukuba awukwazi ukuba wongeze kwi-salad yemifuno, ungalibali ngokukrazula iklabishi ebomvu ebomvu. Ukugqoka isaladi ngeoli yeoli, ijisi lemon kunye netyuwa, uya kufumana isidlo esinempilo nesinomdla.
Kufuneka ukhunjulwe ukuba iklabishi ebomvu kunye neepropati eziqulethe, zichaphazela ixesha lokupheka: lilungele ixesha elide kuneklabishi emhlophe.
Iklabishi ebomvu inemibala emihle yamacembe. Imibala i-carotene, i-xanthophyll kunye ne-cyanine. Kwakhona, iklabishi ebomvu icebile kwi-methionine kunezinye izityalo zeklabishi. Umthunzi weqabunga lala iklabishi incike kwizinga le-asidi yomhlaba. Ngomhlaba we-alkaline, iklabishi iyajika eluhlaza okwesibhakabhaka, kwaye i-asidi ibomvu. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba kwisitya, sinokubala imibala yommelwane. Ukuze ulondoloze lo mbala omnandi, ungongeza iviniga okanye idimu enamisi. Iklabishi iya kuba yinto enhle kakhulu kwaye ilungile.
Iklabishi ebomvu idityaniswe kunye neziqhamo, ingakumbi ngamaapulo. Kubonakala ngokukhenkcezayo ngamaapulo kwiwayini elibomvu. Kwakhona, xa kukhethwa okanye i-salting, iklabishi ebomvu iphekwe ngamaapulo kunye nama-crranberries.
Yonke intloko yeklabishi ebomvu yindawo yokugcina iivithamini kunye ne-microelements. Kubalulekile ukuba onke amabhinqa abukeke amhle kwaye adle. Iklabishi ebomvu inceda ukunyamekela ukukhanya komfanekiso. Ukupheka okulula okupheka kukuzisa inzuzo enkulu kumzimba wesetyhini. Ikhanda elihle kunye ne-elastic, intliziyo enempilo, ukukhuselwa ngumhlaza kunye nesifo sofuba-konke oku kuzisa iklabishi ebomvu kumdla. Isixa esikhulu sefayibha sinikeza umvakalelo wesifo esingenayo ngaphandle kweekhalori ezongezelelweyo. Iimpawu eziqulethwe kwiklabishi ebomvu zilungelelanisa iinkqubo ze-metabolic. Kubalulekile ukuba wonke umntu ofuna ukulahlekelwa isisindo ngaphandle kokulimaza kwimpilo ukupheka nokutya iklabishi ebomvu.
Indlela yokutya okulungileyo: indlela enempilweni yobomi
Iimpawu eziwusizo ze-beet juice
Iingenelelo kunye nokungalunganga kwemifuno nezithelo
Ioyile yembewu yamagilebhisi - isicelo kwi-cosmetology
I-AC AC Ukucoca: ukucoca ulusu lwekamva!
Kunokuba i-pedicure ye-hardware iluncedo
Indlela yokuphucula isondlo somntwana
Kutheni abantu bekhompyutheni?
Thenga i-mattress kwisibhedlele somntwana
Indlela yokuxolela ukutshatyalaliswa komntu othandekayo?
Yintoni enokuyenza xa umntwana unempilo yamathumbu
Indlela yokufezekisa ukulungelelaniswa kumntu owamthandayo
Ukulungiselela umntwana kwi-kindergarten
Ulwimi - indlela yokufumana uthando?
Isidlo sokumisa ubusika ukulungiselela